Maalin: Janaayo 2, 2020
Cahit Turhan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Gaadiidka TCDD ee ay maamusho magaalada Marmaray ee magaalada ayaa siisa raaxo aad u weyn gaadiidka dadweynaha ee Istanbul, YHTs iyo tareeno kale, taas oo u oggolaaneysa marinka Yurub. Furein-Kazlıçeşme [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, tareennada waaweyn ee 2019 ka mid ah ajendaha of Turkey waa mid ka mid ah tareenada transit ugu horeysay ka Shiinaha si Adoo Europe waa raacidda ah, Marmaray iyo Baku-Tbilisi-Kars tareenka [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, la Asia isagoo ku waddooyinka gaadiidka ugu weyn ee u dhexeeya Europe iyo ayaa sheegay in Turkiga loogu talagalay si ay u sameeyaan saldhig logistics. Iyada oo maalgashiga mudnaanta koowaad la siinayo inta u dhexeysa Qorshaha Maareynta Saadka, [More ...]
Kart54, oo bixisa gaadiid xawaareyn, fududaan ah oo la isku halleyn karo oo ay ku tagayaan Sakari ee Magaala-weynta Magaaladda, waxay heleen 2019 dad ka badan sanadka 47; Tirada isticmaalka ayaa kor u dhaaftay 639 milyan sanadka gudihiis. Sakarya [More ...]
Kocaeli Intercity Bus Terminal waxay noqotay xulashadii ugu horreysay ee muwaadiniinta ee gaadiid dhexmara kadib casriyeyntii ugu dambeysay ee ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaaladda. Rakaabka, iyo sidoo kale kuwa raba inay soo booqdaan, waxay diraan askar, waqti ku qaataan kafateer iyo [More ...]
DEMAR, oo ay iska kaashadeen oo ay aasaasteen shaqaalaha tareenka, ayaa la xiray. meel ka mid ah idin siin doonaa a suuqyada adeega gaarka ah ee Turkey baabuur Industry A.Ş. (TÜVASAŞ) oo ka mid ah xubnaha Midowga Tareennada Shaqaalaha abaabulan ee 1983, SSI ayaa aasaasay BIRTA Consumer Cooperative [More ...]
Waxaa reebban in la sugo rakaabka wata baananada garoonka diyaaradaha Istanbul. Meel cusub ayaa loo abuuri doonaa soo dhaweynta rakaabka. Ismaaciil Sanli, Maareeyaha Dekadda Diyaaradaha Magaalada Istanbul, ayaa helay guddi nabadgelyo [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay ku adeegi doontaa khadka M2 Yenikapı - Hacıosman sabtida oo leh 8 tareen Sabtida. Xitaa rakaabka qaada xamuulka ayaa kor u kici doona 33 boqolkiiba. Metro, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) [More ...]
Qeybta Koontaroolka Deegaanka iyo Koontaroolka Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, ma aysan siineynin wasakheynta Izmit Bay. Kooxo shaqeeya 7 saacadood maalintii, 24 maalmood usbuucii, 2019 markab sanadka 13 [More ...]
Denizli Metropolitan Municipal, oo abaabushay dhammaan fursadaha qof kastaa ku sameyn karo isboorti laga bilaabo 7 ilaa 70 Denizli, wuxuu ka bilaabaa koorso baraf barasho oo Denizli Ski Center taas oo noqotay xarunta soo jiidashada dalxiiska jiilaalka. Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli, [More ...]
Maalintii ugu horreysay ee 2020 dadka deggan Denizli waxay u duuleen 1500 mitir dhererkoodu sarreeyo Denizli Cable Car iyo Bağbaşı Plateau. Bağbaşı Plateau waxaa ka buuxa muwaadiniin doonaya inay la kulmaan farxadda barafka maalinta koowaad ee sanadka cusub [More ...]